अष्ट्रेलिया सरकारले १० वर्षपछि बढाएको ब्याजदरले त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीलाई कस्तो असर पार्ला ? « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलिया सरकारले १० वर्षपछि बढाएको ब्याजदरले त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीलाई कस्तो असर पार्ला ?
वैशाख २३, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाले एक दशक भन्दा बढीमा पहिलो पटक आफ्नो ब्याज दर बढाएको छ। करीब १ दशकको समयमा पहिलो पटक ब्याजदर वृद्धि हुँदा त्यहाँ मूल्य वृद्धि हुने अनुमान सुरू भइसकेको छ।
अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले मंगलबार नगद दर २५ आधार बिन्दुले ०.३५ प्रतिशत मा बढाइने बताएको छ। यसभन्दा अघि सन् २०१० को नोभेम्बर महिनामा अष्ट्रेलियामा ब्याजदर बढाइएको थियो।
अष्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंकका गभर्नर फिलिप लोले महामारीको समयमा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्नका लागि राखिएको केही ‘असाधारण मौद्रिक समर्थन’ फिर्ता लिन सुरु गर्ने यो नै सही समय समय भएको बताएका छन्।
अर्थतन्त्र लचिलो साबित भएको छ र मुद्रास्फीति अपेक्षा गरिएको भन्दा उच्च स्तरमा उठेको छ। लोवले एक विज्ञप्तिमा भने, ‘अहिले प्रमाणहरू छन् कि ज्यालादर वृद्धि भइरहेको छ। यो र ब्याजदरको अत्यन्त न्यून स्तरलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक अवस्थालाई सामान्य बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
अष्ट्रेलियाका अर्थविद्हरूले १५ आधार बिन्दुले ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरेका थिए। तर, केन्द्रीय बैंकको निर्णय उनीहरूको अनुमान भन्दा धेरै माथि गयो। रोयटर्सले गरेको सर्वेक्षणमा ३२ जना अर्थविद्हरूले १५ आधार बिन्दुले ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरेका थिए।
अष्ट्रेलियाको वित्तीय सेवा फर्म एएमपीका लगानी रणनीतिका प्रमुख र प्रमुख अर्थशास्त्री शेन ओलिभरले दर वृद्धिको मापन बजारको अपेक्षाभन्दा माथि रहेको बताए। उनले भने, ‘आरबीएले मुद्रास्फीतिलाई फिर्ता ल्याउने आफ्नो संकल्पलाई सङ्केत गर्नका लागि केही निर्णायक गर्नुपर्दछ भन्ने तर्कलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।’
विश्लेषकहरूले मुद्रास्फीतिको तीव्र वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने अपेक्षा गरेका थिए। पछिल्लो त्रैमासमा खाद्यान्न, पेट्रोल र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ।
अष्ट्रेलियाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहिलो त्रैमासिकमा लागि २.१ प्रतिशतले बढ्यो । जबकी यसको अनुमान १.७ प्रतिशत गरिएको थियो। वार्षिक आधारमा, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशतले बढेको छ। यो वृद्धि २००१ यताकै उच्च भएको तथ्यांकहरूले देखाएको छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा एएमपीका ओलिभरले नगद दर वर्षको अन्त्यमा १.५ प्रतिशत र अर्को वर्षको मध्यमा २ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन्। ‘मौद्रिक नीति अझै धेरै सजिलो भएकोले दर वृद्धिले आर्थिक रिकभरीलाई डि-रेल गर्ने सम्भावना छैन, तर यसले घरको मूल्यमा मन्दी ल्याउनेछ। जहाँ हामीले २०२४ को सुरुमा आवास मूल्यहरू १० देखि १५ प्रतिशत झरेको देख्छौं’ उनले भने।
होबार्टमा रहेको वित्तिय संस्था मनिक्वेसटकी सञ्चालिका तथा होमलोन विशेषज्ञ मेघना राउत दशकपछि बढेको ब्याजदरले व्यवसाय र आवास क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार अष्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंकले ब्याजदर बढाएपछि अरू बैंकले पनि निश्चित रूपमा नै ब्याजदर बढाउँछन्।
उनि भन्छिन्, ’रिजर्भ बैंकले ब्याजदर बढाएपछि अन्य बैंकहरूले हप्तादिन भित्र ब्याजदर बढाउँछन्। कतिले बढाइसकेका छन्। ब्याजदर घटाउँदा एक्सन लिन महिनादिन जति पर्खेका बैंकहरूले ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै बढाउन सुरू गरिसके।’
राउतका अनुसार पछिल्लो ब्याजदरमा ऋण लिएकाहरू फिक्स ब्याजदरमा बसेका छैनन् भने उनीहरूको ब्याजदर पनि अब बढ्दै जानेछ। ’पछिल्लो ब्याजदर २ प्रतिशत थियो भने फिक्समा नबसेकाहरूको ब्याजदर ३–४ प्रतिशत हुनसक्छ।’ उनि भन्छिन्, ’बैंकहरूले ब्याजको भारी ग्राहकहरूलाई नै पास गर्ने हो। जसले लापरबाही गरेर ठूलो रकम फिक्स ब्याजदरमा लिएका छैनन्, उनीहरूलाई अब ब्याजको बोझ थप बढ्नेछ।’
तर, अष्ट्रेलियामा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई र जानेहरूलाई पनि यो ब्याजदरले प्रत्यक्ष असर नपर्ने राउत बताउँछिन्। उनका अनुसार अष्ट्रेलियामा बसेका विद्यार्थीहरूले व्यक्तिगत ऋण लिएका छन् भने उनीहरूलाई असर पर्नसक्छ। ’कोही विद्यार्थीले पिआर भएकाहरूसँग मिलेर घर लिनुभएको छ भने उहाँहरूले तिर्नुपर्ने रकम बढ्छ। तर, यो अवस्था सामान्य हुन्छ। अन्यथा यताबाट जानेहरू विद्यार्थीलाई अहिले बढेको ब्याजदरले केही असर गर्दैन।’ राउत भन्छिन्।
पतिसँगै होटलमा बसेकी महिला झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला
जेठ ११, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको एक होटलमा पतिसँगै बसेकी एक महिला झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी छन्। फुङलिङस्थित तोक्मेस्थित कफी सप होटलको कोठामा
रहस्यमय हत्याको सूचना दिनेलाई १० लाख डलरको इनाम घोषणा गर्दै न्यु साउथ वेल्स प्रहरी
काठमाडौंको पछिल्लो अपडेटः मेयरमा बालेन उपमेयरमा सुनिताको फराकिलो अग्रता